Kulamada Golaha Shacabka oo dib u furmaya dhamaadka bisha Sebteembar – Kalfadhi
Kulamada Golaha Shacabka oo dib u furmaya dhamaadka bisha Sebteembar
Xildhibaannada golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli ku jira fasax laba bilood ah iyaga oo shaqada dib ugu soo laaban doona 27-ka bisha Sebteembar.
Qaar kamid ah xildhibaannada golaha ayaa u safray dibadda halka qaar kalena ay ku laabten deegaanadii laga soo doortay kuwa badana waxa ay weli ku sugan yihiin caasimada Muqdisho.
Xildhibaan Maxamed Xasan Ganey oo kamid ah xildhibaannada golehan ee laga soo doorto maamulka Jubbaland waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isaga oo si dhaw ula socday xaalada dadka iyo deegaannada Jubbaland.
Waxa uu xildhibaanka Kalfadhi u sheegay inuu waqti badan gelin doono muddada fasaxiisa arrimaha maamulka Jubbaland ee isaga laga soo doortay.
Haddaba xildhibaannada golaha Shacabka maxaa horyaalla fasaxa kadib ?
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa fasax dib uga soo laabanaya si ay usii wadan howlihii baarlamaanka,ajandooyin badan ayaana horyaalla golaha,sida ay Kalfadhi u sheegen mudenayaal ka tirsan Aqalka Hoose.
Ajandeyaasha Horyaalla Golaha
-Sharciga la dagaalanka Argagixisada
– Sharciga duulista hawada
– Sharciga xallinta Hubka
– Sharciga nashqadeynta Xamar
Iyo ajandeyaal kale oo badan oo ay ku jiraan mooshino kala duwan oo ay imminka diyaarinayan labada gole ee baarlamaanka.
Mooshinka isha lagu wada hayo waa midka ay mudenayaasha baarlamaanka ka diyaarinayan joogitaanka ciidamada Kenya oo lagu eedeyay gabood fallo iyo burburinta hanti ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed.
Cabdirisaaq Jindi ” Xannibaadda lagu soo rogay duulimaadyada Kismaayo waa daan daansi”
Senetor Jawaahir “AMISOM looguma yeerin amni-darro ka jira magaalada Dhuusamareeb”